नेहा कक्कडको पारिश्रमिक सुनेर सबै चकित, हेर्नुहोस् उनको पहिले र अहिलेको पारिश्रमिक - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / नेहा कक्कडको पारिश्रमिक सुनेर सबै चकित, हेर्नुहोस् उनको पहिले र अहिलेको पारिश्रमिक
नेहा कक्कडको पारिश्रमिक सुनेर सबै चकित, हेर्नुहोस् उनको पहिले र अहिलेको पारिश्रमिक
आइतबार, जेठ २३, २०७८
बलिउडकी सफल पाश्र्व गायिका नेहा कक्कड आज आफ्नो ३२ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । नेहाको जन्म सन् १९८८ जुन ६ मा क्रृषिकेशमा भएको थियो । नेहाको परिवार निकै नै गरिब थियो । नेहा र उनका पिता स्कुलको बारिह समोसा बेच्ने काम गर्दथ्य ।
आफ्नो पिताको साथ दिने सोचका साथ नेहाले ४ बर्षको उमेरमा नै धार्मिक कार्यक्रममा गीत गाउन सुरु गरेकी थिइन् । सो समयमा नेहालाई पारिश्रमिक वापत ५ हजार रुपैयाँ मिल्ने गर्दथ्यो ।
नेहाले आजसम्म गायनको कुनै तालिम लिएकी छैनन् । तर, उनी आज बलिउडको सर्वाधिक सफल पाश्र्व गायिका बनेकी छिन् । नेहाले सन् २००८ मा आफ्नो डेब्यू एल्बम ‘नेहा दि रकस्टार’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले बलिउडमा ‘मिरबाई नट आउट’ नामक चलचित्रबाट पाइला राखेकी थिइन् । यसपछि, उनले ‘यारिया, क्विन, गब्बर इज ब्याक, सनम रे, कपूर एन्ड सन्स’ जस्ता हिट चलचित्रमा गीत गाएकी छिन् ।
नेहाले विश्वभर हजार भन्दा बढी कन्सर्टमा आफ्नो प्रस्तुती दिइसकेकी छिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार, उनले एउटा चलचित्रमा गीत गाएको ८ लाख पारिश्रमिक लिने गर्छिन् । उनी सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने गायिका हुन् ।
गायिका नेहा कक्कड सन् २००८ मा नायक हिमांश कोहलीसँग ब्रेकअपका कारण चर्चामा थिइन् । तर, उनले सन् २०२० मा गायक रोहनप्रित सिंहसँग बिहे गरिन् ।
आँचल अहिले पनि भन्छिन्, ‘मेरो रियल हिरो पल नै हो’, महानायक कस्लाई मान्छिन् ? (भिडियो हेर्नुस्)
कोमल वलीको विवाह किन रोकिन बहिनी प्रज्ञाले ? नारायणकाजीको कुरा गर्दा भयो हंगामा (भिडियो हेर्नुस्)
संजोग कोइराला जब स्वस्तिमा र निश्चलको वेडरुममा सिधै गए ? घटना सुनाएर गरे रमाइलो (भिडियो हेर्नुस्)
अजयसंग नभएको भए के शाहरुखसंग विवाह गर्थिन काजोलले ? यो प्रश्नमा काजोलले दिइन् यस्तो जवाफ
कसरी आयो निखिल उप्रेतीमा बैराग्य ? कस्तावाट कस्ता भए, यसरी आयो उनको जिवनमा परिवर्तन (भिडियो हेर्नुस्)
१.मेलम्चीबाट फर्किएकि आँचल शर्माले यस्तो भनिन्, सबै चकित (फोटो र भिडियो सहित)
२.अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एमालेका अर्का चर्चित नेता पनि अस्ताए
३.नायिका आँचल शर्माले श्रीमान र परिवारको खोलिन भित्रि रहस्य (भिडियो), सबै चकित
४.अभिनेत्री आँचल शर्माको नजरमा पल शाह यस्तो रहेछन्, सबै चकित
५.श्वा'स फे'र्न गा'ह्रो भएका नेता खनालले अस्पतालबाट दिए यस्तो सन्देश, सबै चकित
६.अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला हुने !
७.निशा घिमिरेलाई आँचल शर्माले यति ठुलो सहयोग गर्ने, सबै चकित
८.सातामा दुई दिन बिदा, बजार खोलिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने